Espaina: Dihy Nandritra Ny Procession Kristy Nitsanga-ko Velona Nanjakan’ilay Hira Breziliana Malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2012 1:45 GMT
Fanamarihana: Na dia afaka mandika soa aman-tsara ny voambolana hoe procession ho diabe na diam-pirosoana aza izahay dia manaja ny fiteny katolika romana rehefa fantatray izany ary tsy mbola namadika azy io ho amin'ny voambolana malagasy ny ambaratongam-pahefana ao, ilazao ihany izahay raha efa misy ny teny malagasy raikitra ho amin'izany.
Tratran'ny Telomania teo ampandihizana nandritra ny hira malaza iraisampirenen'i Michel Teló mitondra ny lohateny hoe “Ai Se Eu Te Pego” ny frera nitondra ny sarin'i Kristy Nitsanga-ko velona nandritra ny procession mamarana ny herinandron'ny Paska Kristianina tao Alhama de Murcia, Espaina.
Hita any amin'ny fampitam-baovao espaniola isan-karazany sady nisy nampakatra imbetsaka tamin'ny YouTube ny lahatsary ahitana ny fihetsiketsehana hany ka tsy fantatra marina izay olontsotra tena niavian'ny lahatsary. Hita ao amin'ny La Opinión de Murcia [es]:
Talanjona tanteraka ireo nandehandeha nanerana ny lalan'i Alhama de Murcia raha vavolombelon'ny zavatra tsy fahitany nandritra ny herinandron'ny Paska, ary niova ho nifety kokoa sy nalaladalaka kokoa ny hira manaraka ny sary fototra amin'ny ankapobeny.
Resucitó hoy i Juan Carlos Guijarro Moreno CCBY
Nanakoako nandritra ny procession ny hira pop Breziliana malaza indrindra Ai Se Eu Te Pego (Oh If I Catch You) hirain'i Michel Teló sy ny hira Waka Waka ataon'ny Kolombiana Shakira no nanakoako nandritra ny procession.
Nanavatsava nanerana izao tontolo izao, araka izay efa voasoratra ato amin'ny Global Voices mitondra ny lohateny hoe: Brezila: Nihanafana ny adihevitra ara-kolontsaina momba ny hira hoe ‘Oh if I Catch You’ [Oh raha tratrako ianao] [fr] ary nanoratra manokana momba ity dihy an-dalamben'ny Paska ity i Ideal.es [es] avy ao Grenada, Espaina :
Nanafika tsy nisy fombafomba indray ny ‘Ai Se Eu Te Pego’. Io no hira amin'izao fotoana izao ary miampita sisintany maro araka ny hita ao amin'ny Youtube. Nahaforona mpanaraka i Miche Télo. Ny zavamisy dia nahita lalana ho lohalaharana nandritra ny herinandron'ny Paska ity lohalaharana nandritra ny krismasy, lohataona ary mety ho lohalaharana mandritra ny fahavaratra ity. Izany no tanjaky ny Ai Se Eu Te Pego. Nanokatra ny lalany hatrany i Michel Teló miaraka amin'ny ‘Ai Se Eu Te Pego’ na dia amin'ny fotoanan'ny laretirety, fotoam-pivavahana sy ara-panahy tahaka ny tamin'ity fotoana ity aza ary nanavao ny fanaony sy hihoatra ny fomba fandeha mahazatra ka nanao ny dihy manokana momba an'i Kristy nitsanga-ko velona ny freran'i Alhama ao Murcia hanaraka ny gadon-kira mozika Breziliana.
Na dia namoaka ny sarin'ny dihy tamin'ny hiran'ny amboara manerantanin'ny baolina fandaka Waka Waka, nohirain'ny mpihira Kolombiana Shakira azy ny frera, dia ilay lahatsary ahitana ny hiran'i Michel Teló ihany no nalaza.